Akawanda maApple Stores akapambwa muUS nekuda kwekuratidzira naGeorge Floyd | Ndinobva mac
Akawanda maApple Stores akapambwa muUS nekuda kwekuratidzira naGeorge Floyd
(Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokuratidzira pachena kana nerunyararo, kana kupokana nechinhu chipi zvacho. Izvo zvisingagamuchirike ndezvekuti idzi sisitimu dzevanhu dzinoshandiswa kurwisa fanicha yemumaguta, kana kuparadza uye kupamba zvitoro yemarudzi ese
Mazuva ano tiri kuona kuwanda kwevagari kuratidzira vachirwisa kufa kwe George floyd paakamiswa nemapurisa. Asi chinhu chimwe kuratidzira mumigwagwa uye kuratidzira, uye zvakatonyanya kushandisa mukana wemhirizhonga yemumugwagwa kuparadza mahwindo ezvitoro uye kupamba zvitoro. Dzakati wandei dzave Apple Stores.
Zvitoro zveApple zvave chinangwa chevanovhiringa mukana panguva ye kuratidzira mumugwagwa izvo zviri kugara pasi rese muUnited States, nezvimwe zvivakwa zvichitambura zvakanyanya nekukuvara kwemawindo, pamwe nehumbavha hwevapambi.
Rufu rwemurume asina zvombo, George Floyd, panguva ya kusungwa muMinneapolis, Minnesota, yakonzera kuratidzira mumaguta makumi matatu muUnited States. Varatidziri vari kutsvaga kururamisira Floyd, uyo akashaya mushure mekunge mupurisa ashandisa ibvi rake kuzvitsigira pamutsipa wemunhu akabatwa sechikamu chekusungwa, nemifananidzo yechiitiko ichi ichifamba pamasocial media nenzvimbo dzenhau uye zvichikonzera kutsamwa kubva kuvagari vane hanya.
Kuratidzira uku kwakakonzera manyuko emhirizhonga, kusanganisira kukuvara kwepfuma uye kupamba, sevamwe varatidziri vanotora mukana wemamiriro ezvinhu kukonzera nyonganiso. Nekuda kwemutengo wakakwira wezvigadzirwa zveApple, zvitoro zvaro zvave zvinangwa zvekuparadza hwindo zvese nekuba.
Kupamba muApple Chitoro mumaguta akasiyana
En Portland, Oregon, Chitoro cheApple muPioneer Nzvimbo ma windows akapwanywa mativi ese, mifananidzo uye ruzivo rwakapihwa na "Nate" zvinoratidzira. Chitoro chaive changovhura mazuva maviri apfuura, uye chinoda kugadziridzwa kwekunze kwekunze kusati kwazovhurirwa vatengi.
Vhidhiyo yechitoro chimwe chete yakanyorwa naZane Sparling kubva ku «Iyo Portland Tribune»Inoratidza vanhu vanopinda muchitoro chakavharwa uye vachitiza neApple zvigadzirwa, zvinosanganisira zvese zvinoratidzira tafura zvikamu uye stock yakasara pane masherufu.
Chitoro cheApple muPortland chiri kubvutwa panguva yekuratidzira pic.twitter.com/GqmGCOqRkt
- Zane Sparling (@PDXzane) Dai 30, 2020
En Minneapolis, Hennepin Avenue Apple Store yakaparadzwa neChitatu uye yakabvutwa China manheru. Vakapamba vakasiya chitoro chakafukidzwa neguruva rekudzimisa moto, nematafura ekuratidzira asina chinhu.
Mamiriro ekukurumidzira mu Georgia akamanikidza maApple Stores ese kuti avhare. Vashandi vepaAvalon Apple Store vanoonekwa vachirongedza zvigadzirwa zvekuratidzira muchitoro Mugovera manheru, vachitarisira mhirizhonga pamwe nekugona kupamba.
Vanoratidzira vakonzera zvakare kukuvara kune Apple Chitoro mu Scottsdale, Arizona Mugovera manheru, pamwe nemamwe mabhizinesi nemaresitorendi muScottsdale Waterfront uye Scottsdale Fashion Square nzvimbo, maererano neABC15. Vhidhiyo yacho yakanyorwa ichiratidza vanhu vakawanda vachimhanyira kuApple Store mushure mekupaza mukova, zvakare mukuedza kutora iPhones neMacBooks.
Chitoro cheApple chakapambwa uye vakakwanisa kupinda mumashopu kuburikidza neApple chitoro. # fox10phoenix pic.twitter.com/YoUwRSbiRq
- Mario Fox10 (@ MVphotoFox10) Dai 31, 2020
En Washington DC, boka revanhu rakaungana paApple Chitoro muvhidhiyo yakatorwa naCaleb Hull. Muvhidhiyo, masuo ezvitoro anomanikidzwa kuvhurwa, nevanhu vachimhanyisa kupamba uye vasina chavakasiya chitoro.
Chitoro chose chemaapuro muDC chakapambwa. Hapana chakasara. Zvakatora maminetsi manomwe pasati pauya mupurisa mumwechete. pic.twitter.com/SijiCTcNjD
- Caleb Hull (@CalebJHull) Dai 31, 2020
En Filadelfia, vacherechedzi vakaona vanhu vachipinda nekubuda muApple Chitoro mune imwezve nzira yekuba. Kunze kwechitoro, motokari yemapurisa yakanga ichitsva.
COP MOTO PAMOTO, APPLE STORE RAKABHARA IN PHILLY
- The_Real_Fly (@Zvechokwadi_Zvinoda) Chivabvu 31, 2020
Utsi (@ Smoke56895160) Dai 31, 2020
Michael Kan wePCMag akaona zviratidzo zvekuti vapambi vakaedza kuwana Apple Store mu San Francisco, kuedza kusina zvibereko sezvo pakanga pasina zvinhu zvinoratidzwa zvekuba. Mifananidzo yacho inoratidzawo mahwindo epazasi akafukidzwa pamativi epamberi pechitoro, nepo iwo magirazi akareba aive asina kudzivirirwa.
Zvinoita kunge vapambi vakaedza kupinda muSan Francisco Apple chitoro. Asi hapana zvigadzirwa mukati meimwe nzira pic.twitter.com/24NNIIkswQ
- Michael Kan (@Michael_Kan) Dai 31, 2020
Sechikamu chemitemo yayo yekuchengetedza, Apple inoshandisa akasiyana mavhezheni emidziyo yayo yemamodhi ayo emodhi, ayo akarongwa kuti ashande mukati mechitoro chete, uye zvakaoma kwazvo kuti zviite kuti zvishande. Izvi zvinoreva kuti kupamba kwacho kuchabatsira zvishoma kune avo vanotora zvigadzirwa kubva kuApple Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Akawanda maApple Stores akapambwa muUS nekuda kwekuratidzira naGeorge Floyd
Apple Yekucherechedza Series 6 Inogona Kusanganisira Micro LED
Mune dzimwe nyika, kuwedzera RAM ye13 ”MacBook Pro inopeta mutengo